သင်၏ Amazon Prime ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို ဖျက်နည်း
Prime Video အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ကိုင်ထားလိုက်သည်နှင့် သင်သည် အကြောင်းအရာများစွာကို ကြည့်ရှုပြီး အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် တစ်ခုခုကို ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်း ၎င်းကို သင်၏ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းအောက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယခုအခါ ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို ရှင်းလင်းရန် အမှန်တကယ်မလိုအပ်သော်လည်း၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Amazon သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ထိုစာရင်းရှိ အကြောင်းအရာများကိုပင် ဖျက်ပစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဤအရာကိုလုပ်လိုသူဖြစ်ပါက၊ ဤသင်ခန်းစာသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဘတ် Signal Messaging app အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
သင်၏ Amazon Prime ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို ဖျက်နိုင်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အဆင့် 5. သင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ရရှိလာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အကောင့်ဆက်တင်များဝင်းဒိုးရှိ 'စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း' တက်ဘ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 6. ယခု သင့်ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို သင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်ဖျက်လိုသည့်အရာတစ်ခုကို သင်ရှာဖွေပြီးသည်နှင့် ခေါင်းစဉ်ဘေးရှိ 'ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းမှ အပိုင်းများကို ဖျက်ရန်' ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ပါ။
ခေါင်းစဉ်ကို သင်၏ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းမှ ယခုဖယ်ရှားလိုက်ပါမည်။ ယခု၊ သင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Prime Video တွင် ၎င်းကိုရှာဖွေသည့်အခါ ခေါင်းစဉ်ကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းမှ အကြောင်းအရာများကိုသာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
လွန်ခဲ့သော TikTok ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်သူက စတင်တာလဲ။
နောက်တစ်ခု WhatsApp ပေါ်ရှိ အမှတ်အသားများကို နားလည်ရန် လွယ်ကူမြန်ဆန်သော လမ်းညွှန်